जातीय वि’भेद भनेको के हो ? «
जातीय वि’भेद भनेको के हो ?
प्रकाशित मिति : २५ चैत्र २०७५, सोमबार ११:२२
जातीय वि’भेदलाई अंग्रेजीमा रेसियल डिस्क्रिमिनेसन भनिन्छ । जातीय वि’भेदको पाँचवटा आधारहरु छन् । एक, जन्मको आधारमा गरिने वि’भेद छ । दुई, वंशको आधारमा गरिने वि’भेद । तीन, वर्णको आधारमा, आँखाको रंग, छालाको रंग, कपालको रंगको आधारमा गरिने वि’भेद आदि । तर यस्ता वि’भेदमात्रै नभएर संस्कृति, पहिचान, भाषा, धर्म आदिको आधारमा हुने वि’भेद जातीय वि’भेद हो । मानवअधिकारको हकमा यो कुरा आउँछ ।
नेपालमा जातीय वि’भेद छ की छैन ?
जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐनमा जातीय वि’भेदलाई एउटा स्वभाविक प्रक्रिया मानेर कानुन बनाइएको थियो । त्यसले सम्पूर्ण जनता, सामाजिक–सांस्कृतिक समूह, जातजातिहरुलाई तल र माथिको वर्णाश्रममा राख्यो । उच्च र तल्लो जातको सीमारेखा कोर्यो । उच्च जात हुनुको मतलब उच्च किसिमको अवसर प्राप्त गर्नु, उच्च ओहदामा बस्नु, उच्च सुविधाहरु उपभोग गर्नु, तल्लो जातलाई हेप्न र कजाँउनको लागि स्वभाविक रुपमा अधिकार पाउनु भन्ने भयो । त्यस्तै, तल्लो जाति हुनुको मतलब चाहिँ तल्लो स्तरको काम गर्नु, कम सम्मान पाउनु, र माथिल्लो जातिबाट हेपिएर बस्नु, उनीहरुको सेवामा तल्लीन हुनु भन्ने भयो । नेपालमा जातीय वि’भेदलाई एक हिसाबले स्वभाविक रुपमा मानिदै आइयो । सन् १९९० पछि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै त्यस्तो उचनिचलाई लोकतन्त्रको वि’रुद्ध भएको, मानवअधिकारको वि’रुद्ध भएको आवाजहरु उठ्न थाले । तर, अहिले पनि कतिपय मान्छेहरु जातीय र जन्मको आधारले अरुलाई हेप्नुलाई एकदम स्वभाविक मान्नेहरु हामीसँग प्रशस्त छन् ।
नेपालमा जातीय वि’भेदबाट विशेषतः कुन कुन समुदाय पीडित भएका छन् ?
हिन्दू वर्णाश्रमको जाति प्रथाअनुरुपको छु’वाछु’त प्रथाबाट प्रत्यक्ष रुपमा जातीय वि’भेदमा द’लित समुदाय परेका हुन् । नेपालमा पहाडमा पाँच समूहका र तराईमा दश समूहका दलितहरु छन् । उनीहरु नै छु’वाछु’तको हिसाबले जातीय वि’भेदमा परेका छन् । त्यसपछि आदिवासी जनजाति समुदाय जातीय वि’भेदमा परेका हुन् । उनीहरुमाथि प्रत्यक्ष छुवाछुत भएको देखिदैन । तर उनीहरुको पहिचान, भाषा, खानपान, भेषभूषा आदिको आधारमा वि’भेद गरिएका छन् । उच्च जातभन्दा तलको हो भनेर स्वभाविक रुपमै भे’दभावपूर्ण व्यवहार गर्ने गरिएका छन् । आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो मातृभाषा बोल्दा अनपढ, अ’सभ्य हुने, परम्परागत खानपान खायो भने अ’पराधी वा फोहोरी हुने, (जस्तै गाईको मासु खाँदा का’नुन लाग्नु, जे’ल जानु) कुरा जातीय वि’भेद नै हो । जसलाई जन्म, वर्ण र वंशको हिसाबले पनि जा’तीय वि’भेद नै भन्न सकिन्छ । किनभने आदिवासी जनजातिहरु रेसको हिसाबले पनि फरक छन् । उनीहरु मंगोलियन समुदायबाट आएका र उच्च जातिहरु आर्यन समुदायबाट आएको कुरा यहाँ जोडिन्छ । तर, नेपालमा रेसियल कुरा गर्दा अलिक अमिल्दो र जेलिएको लाग्ने अवस्था पनि छ । बाहुन क्षेत्री र दलित दुबै आर्यन समुदायबाटै आएका हुन् । धार्मिक दृष्टिकोणले विभेदमा परेको मुस्लिम समुदाय पनि छ । र यसमा आदिवासी जनजाति पनि परेका छन् । दलित पनि परेका छन् । भाषिक र भौगोलिक हिसाबले विभेदमा समुदाय पनि छ, मधेसी समुदाय ।
धेरै पहिलेदेखि नेपाल जातीय वि’भेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धीको पक्षराष्ट्र छ । तर त्यो अझैसम्म अन्त्य भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा के उपाय छ ?
पहिलो कुरा, उच्च जातिको मानव समुदायको रुपमा रहेको हे’पाहा मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्छ । त्यो मानसिकतालाई लोकतन्त्रवि’रोधी प्रवृत्ति हो, मानवअधिकारको वि’रोधी हो भनेर आत्मसात गर्नुपर्छ । राज्यले त्यतिखेर मात्रै कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सक्छ जतिखेर शिक्षित समुदायले त्यो कुरालाई आत्मसात गर्दै अगाडि लैजान्छ । नेपालमा दलित, आदिवासी र मधेसी कुनैपनि समुदायले जातीय वि’भेद चाहदैन । तर उच्च जातिका समुदायहरुले निरन्तरता दिइरहेका छन् । उच्च जातिमै वि’भेद नगर्ने चेतना र साहस हुनुपर्यो । अमानवीय व्यवहारलाई चिन्न सक्नुपर्यो र आफू पनि मानव हुने र अरुलाई पनि मानव ठान्ने, मान्ने र त्यही अनुरुप व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुनुपर्यो । साथै, जो वि’भेदमा परेका छन्, उनीहरुमा पनि त्यो वि’भेदलाई नकार्ने चेतना चाहियो । यसमा राज्यले पनि शक्तिशाली समूहको सट्टा विभेदित समूहको पक्षमा नीतिगत र प्रक्रियागत रुपमा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियममा भएका मापदण्डहरुलाई राज्यले सम्प्रेषण गर्ने र तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
जातीय वि’भेद उन्मूलनसम्बन्धी सन्धि नेपालले १९७१ मै पारित गरेको थियो । तर, रेसियल डिस्क्रिमिनेसनलाई कुनै कुनै बेला निहित स्वार्थ अनुरुप जातीय वि’भेद होइन भनेर समेत व्याख्या गर्ने गरिन्छ । त्यो व्याख्याकौ आधारमा राज्यले रेस भन्ने कुरा हाम्रोमा महत्वपूर्ण होइन र सान्दर्भिक कुरा पनि होइन भन्ने गर्छ । त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा जातीय वि’भेदहरु प्रशस्तै हुँदाहुँदैपनि छलफलमा कम आउँने गरेको हो । र यो कन्भेन्सन्को कार्यान्वयन पनि कमै भएको हो । तर जातीय आधारमा हुने वि’भेद र रेसियल डिस्क्रिमिनेसन एकै स्वरुपको वि’भेद हो भन्ने कुरा नेपालमा बुझ्न र बुझाउनु अत्यावश्यक छ ।
सर्ड समिति अध्यक्ष नेपाल आउनु हाम्रो लागि एकदम सकारात्मक कुरा हो । संयुक्त राष्ट्र संघमा विभिन्न महासन्धीहरु छन् । चार्टरहरु छन । सन्धिहरु छन् । यस्ता सन्धीहरु सम्बन्धित राज्यले नै पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । जातीय वि’भेद महासन्धी संयुक्त राष्ट्र संघभित्र पारित हुँदापनि नेपाली राज्यको प्रतिनिधि थियो । त्यसपछि नेपालले अनुमोदन ग¥यो । अनुमोदन गरिसकेपछि त्यो कार्यान्वयन भए नभएको कुरा हेर्न, अझै राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नको निम्ति संयुक्त राष्ट्र संघले अनुगमन समितिहरु बनाउँछ । त्यही समिति अध्यक्ष फ्रान्सिस्को होसे अहिले हामीकहाँ भ्रमणमा आउनुभयो । उहाँ औपचारिक भ्रमणमा नरहेको भएपनि यो महासन्धीको अहिलेको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? यहाँका विभिन्न अल्पसंख्यकहरुले कस्तो किसिमको वि’भेदहरु भोगिराखेका छन् छ भन्ने कुराको यथार्थताको अध्ययन गर्नको निम्ति नै आउनुभएको हो । यहाँको अवस्थालाई बुझेर त्यहीअनुरुपले अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छलफलमा लैजानको निम्ति उहाँको भ्रमण सान्दर्भिक छ । हाम्रो लागि लाभकारी पनि सावित होला भन्ने आशा छ । उहाँले नेपालमा राम्रो भइराखेको छ भन्ने कुरा देख्नुभयो भने नेपालको लागि एउटा गौरबको कुरा हुनेछ । नेपालले आफूलाई मानवअधिकारको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा उभ्याएको छ भन्ने सन्देश सबैतिर जान्छ । यदि उहाँको बुझाईमा नेपालमा वि’भेद अझै चर्कै रहेछ, यो जटिल सवाल रहेछ भन्ने भयो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पुग्छ र नेपालले अझै अगाडि धेरै गर्नुपर्छ भन्ने खालको दबाब आउने हुन सक्छ । – ईण्डीजेनियस भ्वाईसबाट